I-Eventbrite + Teespring: Thengisa Izikibha Ngamathikithi Akho | Martech Zone
I-Eventbrite + Teespring: Thengisa Izikibha Ngamathikithi Akho
ULwesine, April 28, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, i-2016 Douglas Karr
Sisebenza minyaka yonke umculo nomkhosi wobuchwepheshe e-Indianapolis unyaka nonyaka. Kungumcimbi omuhle lapho siletha khona amaqembu ezifunda futhi sithathe usuku lokuphumula ukugubha ukukhula kwesifunda kanye nokuqongelela imali Umdlavuza Wegazi & Lymphoma Society.
I-ejensi yethu ingumxhasi oyinhloko womcimbi, bese ngokuvamile sithola ezinye izinkampani ukuthi zikhokhele izindleko ezingeziwe. Ngeshwa, noma kunjalo, uxhaso loxhaso luye lungene ngomzuzu wokugcina… lungashiyi isikhathi sokuhlela okuningi!
Ngiyabonga ngobuhle bezobuchwepheshe, noma kunjalo! Ngonyaka olandelayo, sizobe sigudluzela ukuhlelwa komcimbi kancane futhi siwulawule ngokwengeziwe. Umqondo owodwa omuhle esizowusebenzisa ngokuqinisekile yithuba lokuhlanganisa ukuthengiswa kwamathikithi ethu kanye nezikibha zomcimbi. I-Eventbrite futhi Teespring setha uhlelo nje. Vele ungeze Uhlelo lokusebenza lweTespring kumcimbi wakho bese usetha isikibha sakho.
Ukubambisana kwe-Eventbrite ne-Teespring kukuvumela ukuthi ulayishe ubuciko ngokushesha kuzinto ezithengiswayo, usethe intengo yakho, bese wenza ikhasi le-inthanethi ngokushesha lapho ababekhona nabalandeli bengathenga khona. Okuthengiswayo kwakho kuyaphakanyiswa ekhasini lakho lomcimbi.
Noma kunini lapho ufuna ukuthi umkhankaso wakho uphele, uTeespring uzophrinta, apake futhi ahambise yonke imiyalo kubathengi bakho emhlabeni wonke. Bandakanya nababekhona futhi uzame!
Ukudalulwa: Lokho okwethu Uhlelo lokudluliselwa kwe-Eventbrite isixhumanisi.
Tags: ukubhaliswa komcimbiumcimbiimikhosiImaketheukuthengiswa kwezintoi-t-shirtitholeamathikithi
Izikhiye ezi-3 Zokutshalwa Kwezimali Kwezobuchwepheshe Ezimangazayo